पूर्वसचिव भन्छन्ः मेलम्चीको पानी अझै डेढ वर्ष आउँदैन ! « GDP Nepal
पूर्वसचिव भन्छन्ः मेलम्चीको पानी अझै डेढ वर्ष आउँदैन !
Published On : 23 April, 2019 6:24 am
काठमाडौं । सरकारले केही महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइसक्ने दावी गरे पनि सरकारकै एक पूर्वसचिवले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन न्यूनतम पनि डेढ वर्ष लाग्नसक्ने बताएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले मेलम्चीको पानी ल्याउन डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बताएका हुन् । ३० वर्षे सरकारी सेवामा रहेर अघिल्लो वर्ष सेवानिवृत्त भएका उपाध्याय सरकारी सेवाको अन्तिम समय खानेपानी सचिव थिए ।
मेलम्ची आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिए पनि ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
हालै एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथल भयो, यसले गर्दा पनि मेलम्ची समस्यामा गुज्रियो । चुनाव, विदेशी दाताका कडा सर्त, भूकम्पका कारण पनि ढिलो भयो । विभिन्न समस्या आयो । हिजोका संस्था भत्काउँदै, नयाँ बनाउँदै कैयौं मन्त्री फेरिए । तर पछिल्लो समय तीव्र रूपमा काम भएको थियो । तर, ठेकेदारबीचको विवादका कारण अझै डेढ वर्ष ढिला हुन्छ ।
उनका अनुसार अब पनि ठेक्का लगाउन समय खेर फाल्नु हुँदैन । राम्रो ठेकेदार छनौट गर्नुपर्छ । पुरानो ठेकेदार फर्काउने पनि भन्ने पनि थियो । तर, वार्ता गरेपछि नआउन पनि सक्छ । वार्तामा मात्रै समय खेर जान सक्छ ।
पहिलो चरणकै काम ढिलाइ भयो भने दोस्रो चरणको आयोजनाका लागि सम्झौता नहुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंका घरबेटीलाई प्रश्नः छिर्नै नदिएको कोठाको भाडा किन तिर्ने ?
भुवन थापा हाम्रो पुस्ताले अहिलेसम्म सामना र कल्पना गर्नुनपरेको जटिल समयको सामना गर्नु पर्दैछ ।
कोरोना महामारीका लुटेराहरू !
भुवन थापा एक जुगमा एक दिन एक चोटि आउँछ‘ उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ
‘राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय भएन, कात्तिक मसान्तसम्म निर्माणको काम गर्न सक्दैनौं’
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोराना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण
घरबेटीलाई खुलापत्रः व्यावहारिक नबन्ने हो भने घर फिर्ता लिनुस् !
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा निकै स्थापित नाम हो ज्योति अधिकारी । ट्राभल एजेन्सीका क्षेत्रमा